कसरी ब्राउजर मा AEDE प्रेस रोक्न ग्याजेट समाचार
कसरी ब्राउजर मा AEDE प्रेस रोक्न
गुगल दर, AEDE क्यानन पनि भनिन्छ (स्पानिश अखबार सम्पादकहरूको संघ) यो शुल्क छ जसको लागि स right्ग्रह स्वचालित रूपमा सिर्जना गरियो जुन हामीले माफ गर्न सक्दैनौं (सामग्री सिर्जनाकर्ताहरू), यदि हामी चाहन्छौं भने, ती सबै वेबसाईटहरूको लागि जुन केहि प्रकारको लिंक उत्पादन गर्दछ (हामी चलचित्रहरू डाउनलोड गर्ने कुरा गरिरहेको छैनौं) र त्यो सीड्रो भनिने इकाईद्वारा संकलन गरिनेछ (यसको अपरेशनमा सबै शक्तिशाली SGAE सँग मिल्छ) पछि वितरण गर्न। यो यसको सहयोगीहरू बीच।
ताकि तपाइँ यसलाई अझ राम्रोसँग बुझ्नुहुनेछ: गुगल समाचार, बिंग, फ्लिपबोर्ड, फेसबुक र ट्वीटर लगायत अन्यले स्पेनी समाचारपत्र र ब्लगका समाचार लिंक गर्नका लागि शुल्क तिर्नु पर्नेछ।। हो, ब्लगहरू पनि, यद्यपि अधिकांश अन्तर्गत छन् रचनात्मक कमन्स इजाजतपत्र। अधिकांश ब्लगहरू AEDE का साथ दर्ता गरिएको छैन भन्ने तथ्यको बावजुद, तिनीहरू तेस्रो पक्षले यसलाई सहयोगीहरू बीचमा वितरण गर्नको लागि शुल्क लिन माफी दिन सक्दैनन्। अविश्वसनीय तर सत्य।
सबैभन्दा आशावादी पूर्वानुमानले सुझाव दिन्छ कि एसजीएईले करिब million करोड यूरो बढाउनेछ यो क्यानन मार्फत। के हामी ज्यादै पक्का छैनौं त्यो रकम कहाँबाट आउँदछ किनकी यो स्पष्ट छैन कि गुगल र बाँकी प्रभावित कम्पनीहरूले भुक्तान गर्न इच्छुक छन्। यो अफवाह छ कि गुगलले गुगल समाचार बन्द गर्न छनौट गर्दछ (एकमात्र सेवा मात्र यस दरबाट प्रभावित हुनुहोस्) र सम्भवतः अन्य कम्पनीहरूले पनि यसलाई स्पेनमा बन्द गरेर र यो शुल्क बिना अन्य देशहरूमा खोलेर यसलाई बेवास्ता गर्दछन्। मा यो लेखमा AEDE क्याननको सबै विवरणहरूको बारेमा अधिक जानकारी छ.
1 कसरी AEDE सदस्यहरू रोक्ने?
1.3 इन्टरनेट एक्सप्लोरर
1.5 अन्य ब्राउजरहरू
1.6 राउटर मार्फत रोक्नुहोस्
1.7 एन्ड्रोइड उपकरणहरू
1.8 IOS उपकरणहरू
कसरी AEDE सदस्यहरू रोक्ने?
यदि तपाईं विचार गर्नुहुन्छ, धेरै व्यक्तिहरू जस्तो कि यो कानुन सामान्य रूपमा साझा गर्नको लागि आयको स्रोत हो र तपाईं यो दर्दनाक पहलसँग सहकार्य गर्न चाहनुहुन्न भने, हामी तपाईंलाई देखाउँदछौं कि कसरी तपाईं एईडीईमा संलग्न सबै वेबसाईटहरूमा गल्तिपूर्वक भ्रमण गर्नबाट बच्न सक्नुहुन्छ, बिभिन्न ब्राउजरहरूको लागि उपलब्ध विस्तारहरूको लागि धन्यवाद। एकचोटि स्थापना भएपछि, तपाईले गर्नै पर्छ AEDE र CEDRO सँग जोडिएको मिडियाको निम्न सूचीहरू ब्लक गरिएका पृष्ठहरूमा थप्नुहोस्.
गुगल ब्राउजर को लागी हामी संग एक विशेष विस्तार भनिन्छ AEDE अवरोधक। यो विस्तारले हामीलाई स्पानिश अखबार सम्पादकहरूको संघ (AEDE) संग सम्बन्धित ती सबै मिडियाको भ्रमण गर्न रोक्दछ।
फायरफक्सका लागि हामीसँग लेचब्लॉक विकल्प छ। क्रोम जस्तै, हामीले मिडियाको सूची एड-अन बक्स भित्र थप्नु पर्छ र बक्समा जानुपर्नेछ जहाँ हामीले अनुयायीहरूको सूचीको प्रतिलिपि गर्नुपर्दछ।
बाइनरीस्विच एक्लिप्स एक वेब पृष्ठ अवरोधक हो जुन तपाईंलाई निश्चित वेब पृष्ठहरूमा अस्थायी वा स्थायी पहुँच रोक्नको लागि अनुमति दिन्छ। एकचोटि यो अनुप्रयोग स्थापना भयो र वेब पृष्ठहरू जुन हामी ब्लक गर्न चाहन्छौं कन्फिगर गरिएको छ, परिवर्तनहरू प्रभाव पार्नका लागि हामीले ब्राउजर पुन: सुरू गर्नुपर्दछ।
अपशिष्ट समय हामीलाई वेबसाइटहरूको सूची थप्न अनुमति दिन्छ जुन हामी ब्लक गर्न चाहान्छौं सबै डिजिटल मिडिया भ्रमण गर्नबाट बच्न जुन यस पहललाई समर्थन गर्दछ।
बाइनरीस्विथ इक्लिप्सले हामीलाई ब्लक गर्न चाहेको मिडियाको सूची थप्ने बाहेक हामी कुन ब्राउजरहरू प्रयोग गर्छौं भनेर स्थापना गर्न अनुमति दिन्छ ताकि यसलाई प्रयोग गर्न सकियोस्।
राउटर मार्फत रोक्नुहोस्
प्रत्येक राउटर / मोडेमको पहुँच र कन्फिगर गर्न फरक ठेगाना हुन्छ। पहुँच गर्नका लागि तपाईले ब्राउजरमा निम्न आईपीहरू मध्ये कुनै पनि टाइप गर्नुपर्दछ: १ 192.168.1.1 २.१192.168.0.1.१.१, १ 192.168.100.1 २.१1234.०.१ वा १ XNUMX २.१XNUMX.१.१। पासवर्ड प्राय: व्यवस्थापक वा मूल हो र पासवर्ड व्यवस्थापक वा १२XNUMX हो। एक पटक कन्फिगरेसन मेनू भित्र, हामी सुरक्षा सेक्सनमा जान्छौं र URL फिल्टर कन्फिगरेसन विकल्प खोज्दछौं। सबै राउटरहरू / मोडेमहरूले यस विकल्पलाई उस्तै गर्दैनन, त्यसैले यदि हामीले यी विकल्पहरू फेला पारेनौं भने हामीले यस्तै किसिमको खोजी गर्नै पर्दछ। हामी फिल्टर सक्षम गर्छौं र माथि उल्लेखित वेबसाइट वेबसाइटहरू थप्दछौं।
नि: शुल्क समाचार (एईडीई बहिष्कार) अनुप्रयोगले हामीलाई अखबारहरू मात्र पहुँच गर्न अनुमति दिँदछ जुन एईडीईको छैन।
वर्तमानमा एप्पल अनुप्रयोग स्टोरसँग AEDE मिडियाको वेबसाइटहरू फिल्टर गर्न सक्षम हुन कुनै विशेष अनुप्रयोग छैन। अहिलेको लागि, र जब सम्म एक विशिष्ट अनुप्रयोग देखा पर्दैन, हामी सफारी प्रतिबन्धहरू प्रयोग गर्न सक्दछौं वेबसाईटहरू रोक्नको लागि।
WordPress सँग एक प्लगइन छ जो लिंक गर्न बेवास्ता गर्दछ, कुनै ज्ञान बिना, मुख्य स्पेनिश समाचार पत्रहरूको वेब पृष्ठहरूसँग AEDE मा अड्कियो। तपाईंले भर्खर यसलाई स्थापना गर्नुपर्नेछ, यसलाई सक्रिय गर्नुहोस् र तपाईं जान तयार हुनुहुन्छ। प्लगइनले के गर्छ लिंक बदल्नुहोस् AEDE माध्यम तिर वेबसाइटको आफ्नै गृह पृष्ठमा लिंक द्वारा।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » सफ्टवेयर » कसरी ब्राउजर मा AEDE प्रेस रोक्न
तिनीहरूले स्पेनको नाम परिवर्तन गरेर Españistan राख्नुपर्नेछ।
प्यूसलाई जवाफ दिनुहोस्
ब्राउजर «ओपेरा about को बारेमा के हुन्छ? म यी url हरू ब्लक गर्न को लागी एक्सटेन्सन पाउन सकेन।
यी टिप्सका साथ विन्डोज in मा हार्ड ड्राइभ स्पेसलाई पुनः दावी गर्नुहोस्
कसरी वेब पृष्ठहरूमा भिडियोहरूको अटोप्ले रोक्न